W तरीकाका बिक्री कुराकानीहरू बितेको बर्षमा परिवर्तन भयो Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 3, 2017 क्रिस ओर्लोब
परम्परागत बिक्री कुराकानीहरू सदाका लागि परिवर्तन हुँदैछन्। बिक्री चक्रहरूले अब बिक्री चक्र नेभिगेट गर्न प्रथागत कुरा गर्ने पोइन्टहरू र खोज मोडेलहरूमा भर पर्न सक्दैनन्। यसले धेरै विक्रेताहरूलाई थोरै वैकल्पिकको साथ छोडिन्छ तर नयाँ समूह वास्तविकतालाई बुझ्न र सफल बिक्री कुराकानीलाई के बुझ्छ भनेर।
तर हामी जानु अघि त्यहाँ, हामी कसरी पायौं यहाँ?
भर्खरका वर्षहरूमा बिक्री कुराकानीहरू परिवर्तन भएका तीन तरिकाहरू जाँचौं। विक्रेताहरूले सम्भावित खरीददारसँग वार्तालाप कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्वेषण गरेर हामी यो बुझ्न सक्दछौं कि बिक्री कुराकानीहरू कतातिर अघि बढिरहेका छन् र आधुनिक युगमा डिलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नजिक बनाउन कुन नयाँ रणनीतिहरू विकसित हुँदैछन्।
एक परिवर्तित संस्कृति
समाजको विकास हुँदै जाँदा, मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन् जसको अर्थ मानिसहरू पनि बद्लिन्छ परिवर्तनका लागि। समयको क्रममा उनीहरूको सोचाइ, परिवर्तनहरू र उनीहरूको आचरणमा परिवर्तन आउँदछ। आजका दिनहरूमा बेचेको व्यक्ति धेरै विकिबद्ध छन् उनीहरूले विक्रेतासँग संलग्न गरेपछि। उत्पादन विवरण, मूल्य तुलना, ग्राहक प्रशंसापत्र, आदि सजिलै एक अनलाइन उपलब्ध छन् विक्रेता चित्रमा प्रवेश गर्नु अघि। यसले मौलिक रूपमा खरीद प्रक्रियामा विक्रेताको भूमिका परिवर्तन गर्दछ। तिनीहरू जानकारीबाट सरेका छन् संचारक, परामर्शदाता र मूल्य निर्माता.
परामर्श बिक्रीको लागि सिफ्ट
परम्परागत बिक्री पिच अब काम गर्दैन। विक्रेताहरूले आफ्ना सम्भावनाहरूसँग दुई-पक्ष कुराकानी गर्न बाटो खोज्नु पर्छ। सम्भावित खरीददारहरूसँग सेल्सपिपलहरूसँग समय हुँदैन जोसँग उनीहरूको व्यवसायको खोजी गरिएको छैन र प्रायः लामो “भावना महसुस” गर्ने कुराकानीहरू त्याग्न रुचाउँनुहुन्छ। तिनीहरू विक्रेताहरूसँग संलग्न हुन चाहन्छन् जसले आफ्ना अनौंठो चुनौतीहरू र विशिष्ट अवसरहरू पहिले नै बुझ्दछन् जबकि ताजा अन्तर्दृष्टि ल्याउँदा, समस्याहरू सुल्झाउने र मूल्य सिर्जना गर्ने। यसबाहेक, "likability", जबकि एक विक्रेता को लागी एक राम्रो गुण को लागी, अब सफलता को ग्यारेन्टी छैन। विशेष विक्रेताप्रति वफादारी ग्राहकले मूल्य बुझे पछि मात्र आउँदछ।
बहु-च्यानल बिक्री कुराकानी
फेस-टु-फेस सेलिंग अब सम्भावित खरीददारहरूसँग सञ्चार गर्नको लागि प्रमुख तरिका होईन। टेक्स्टि social, सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेर, ईमेल गर्ने, र विशेष घटनाहरूको होस्ट गर्ने, ती सबै तरिकाहरू हुन् जुन तपाईंको सन्देश पुर्‍याउन आवश्यक भएको छ। अर्को शब्दमा, आजका विक्रेताहरू केही हदसम्म बहु-टास्कहरू हुनु आवश्यक छ। यी मध्ये प्रत्येक च्यानलले खरीदारहरुलाई प्रभाव पार्न सक्छ र परिणाम स्वरूप, विक्रेताहरु विस्तार गर्नुपर्दछ र उनीहरूमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सिक्नुपर्दछ।
यो कुनै गोप्य कुरा छैन। परम्परागत बिक्री कुराकानी अब तिनीहरूले एक पटक गरे परिणाम प्राप्त गर्न। पुरानो बिक्री कुरा ट्र्याक एक अधिक सक्रिय, सगाई सिद्धान्तहरूको अधिक नवीन सेट संग प्रतिस्थापन भइरहेको छ।
जानकारी र स्रोतहरूमा अभूतपूर्व पहुँचको साथ, खरीददारहरूलाई अब सेल्सपर्सनको आवश्यकता पर्दैन। तिनीहरूलाई बिक्री चाहिन्छ परामर्शदाता.
बिक्रीको यो नयाँ नस्लले प्रत्येक खरीददारको कुराकानीलाई वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदर्शन गरेर र कम्पनी-विशेष पीडा पोइन्टहरूमा सम्भावित समाधान प्रस्ताव गर्ने समस्या समाधानकर्ता हुनुपर्दछ (ती समाधानहरूले कम्पनी वा उनीहरूले बेचिरहेका उत्पादनहरूसँग केहि गर्न नचाहे पनि)। । आधुनिक विक्रेताहरूले सम्भावित खरीददारहरूलाई उनीहरूलाई कुराकानीको केन्द्रमा राखेर उनीहरूलाई अझ राम्रो जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गरिरहेका छन्। आधुनिक बिक्री कुराकानीको लागि तयार भएर, तिनीहरू बिक्रीको गतिशील, नयाँ वास्तविकतामा फस्टाउनको लागि आफूलाई सेट गर्दै छन्।
टैग: परामर्श बिक्रीबहु-च्यानल बिक्रीबिक्री कुराकानीबिक्री रूपान्तरणबिक्री सक्षमताबिक्री शैली
क्रिस ओर्लोब मा उत्पाद मार्केटिंग को वरिष्ठ निर्देशक छ Gong.io। - B1B बिक्री टीमहरूको लागि # १ कुराकानी खुफिया प्लेटफर्म। गोंगले तपाईंलाई तपाईंको पाइपलाइनको अधिक बिक्रीमा बिक्रीमा कुराकानीमा प्रकाश राखेर मद्दत गर्दछ। यसले रेकर्ड गर्दछ, प्रतिलेखन गर्दछ, र प्रत्येक बिक्री कल विश्लेषण गर्दछ ताकि तपाईं बिक्री प्रभावशीलता ड्राइव, के काम गरीरहेछ र के छैन केहि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, र नयाँ भाडा छिटो र्‍याम्प गर्नुहोस्।